Promo kilasika 5 an'ny Dusty Rhodes 'The American Dream' - Wwe
Promo kilasika 5 an'ny Dusty Rhodes 'The American Dream'
Ireo mpankafy amin'ny vanim-potoana maoderina dia mety manisy marika ny fitiavan'ny CM Punk na Paul Heyman amin'ireo mpiasa mikrô tsara indrindra amin'ny orinasa. Fa raha manontany amin'ny tolona matihanina iray ianao, dia hanome ny anarany Dusty Rhodes ho ilay lehilahy ‘promo’. Ny American Dream dia ary mbola iray amin'ireo mari-pahaizana amin'ny asa mikrô ao amin'ny sehatry ny tolona.
Nandritra ny asany, Dusty dia nalaza tamin'ny fisintonana promos miavaka. Ny ankamaroan'ny zavatra nolazainy tamin'ny alàlan'ny mikropono dia avy amin'ny fo sy henjana. Notantarainy isaky ny naka ny mic izy teny an-tanany ary ny olona rehetra nanomboka ny mpiasa ka hatramin'ny hariva lehibe dia nanamarika rehefa nanomboka niresaka i Dusty. Ny tantara dia nodimandry tamin'ny fomba tsy nampoizina tato ho ato. Ao amin'ny fitadidiany, ity misy fijerena indray ny sasany amin'ireo promos tsara indrindra nataony:
Manampy an'i Boneka Zaza hiala
Baby Doll dia mpitantana tsy fantatra taloha. Izy dia nitantana mpikatroka lehibe maro nandritra ny asany ary Dusty Rhodes no iray tamin'izy ireo. Ny fihazakazaky ny Dusty Rhodes sy Baby Doll dia tonga taorian'ny nanodinany an'i Tully Blanchard sy ny Four Horsemen. Nankahala azy ara-bakiteny ireo mpankafy talohan'ny fihodinana ka sarotra ny nanala azy ho tarehy.
Saingy teo i Dusty mba hanavotra. Fotoana fohy taorian'ny nitodihan'ny tarehy, nifandray tamin'i Dusty i Baby Doll. Dusty dia nitondra azy ho toy ny zazakely miaraka amin'ny fikambanana miaraka aminy, saingy vetivety dia nianjera daholo. Nihodina indray ny Baby Doll mba hifanome tanana amin'i Ric Flair ary nanomboka nankahala azy indray ny mpankafy. Izany dia naneho ny hery tsy maintsy namboarin'i Dusty ny mpankafy.
ahoana ny fijanonana manonofy be
Tsy manana tanjona na hetahetam-po amin'ny fiainana aho
lazao amin'ny tovovavy fa tsara tarehy izy
inona no tokony ataoko izao dia mankaleo aho
hanambaka indray ve ny vadiko amin'ny quiz?
wwe 2017 mandoa isaky ny fandaharam-potoana